Waa kuma Osama Bin Ladin (warbixin dheer Taariikh nololeedkiisii +sawiro) – SBC
Waa kuma Osama Bin Ladin (warbixin dheer Taariikh nololeedkiisii +sawiro)
Hogaamiyaha shabakada Al-Qaacida Osama Bin Ladin wuxuu ahaa nin dunida loogu raadsika badan yahay wuxuu ahaa 54 sano jir mudo 10 sano ay baadigoob ku hayeen sridoonka Mareykanka & dalalka reer Galbeedka.
Osaama Bin Ladin oo Mareykanku ay ku eedeeyaan in uu yahay maskaxdii ka dambeysay weeraradii september 11 ee 2001, waxaa dalka Mareykanka looga haystay nin dambiile ah oo qatar ku ah danaha Mareykanka ee dunida iyo xitaa amaanka gudaha ee wadanka Mareykanka.
Wadaadkan Milyuneerka ah ee isaga tagey nolashii raaxada aheyd kana doortey in uu dhuumalaysi galo waxaa uu dhashey sanadkii 1957 bishii March 10-keedii, waxaana uu ka dhashey qoys ladan oo lacagta si weyn ugu xidideysatey, waa wiil madi ku ah hooyadii Hamida Al- Attas marka la eego qoyska reer Bin Ladin.
Aabihiis Bin Ladin wuxuu ahaa maalqabeen hantidiisu is arki waydey, waxaana xiriir aad u xoogan uu la lahaa qoyska reer Boqor Sacuud ee talada boqortooyada Sacuudiga maamulayey sanooyin fara badan.
Osaama aabihii xiriirkii uu la lahaa qoyska reer Boqor waxay ka dhigey in uu helo fursado caqliga ka baxsan oo uu ku kasbadey hanti malaayiin doolar gaaraysa, waxaana badi hantidaasi ay ka soo xarootey shirkada caanka ah ee dhismaha qaabilsan ee Bin Ladin Contraction Combany waana shirkada inta badan dhistey dhismayaasha ugu caansan wadanka Boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ay ka mid yihiin dhismayashaa dhulka barakacaysay ee Maka iyo Madiina.
Yaraantiisii Osaama wuxuu ahaa nin ku ad adag diinta sida ay sheegaan caruurtii ay isla noolaayeen gaar ahaan kuwa la dhashey, waxaana ay sheegeen inay arki jireen isagoo si weyn u muujiya in uu doonayo in uu noqdo nin diinta Islaamka u adeega.
Osama wuxuu ka mid ahaa 50 caruur ah oo uu dhalaey Mohamed Bin Ladin waana cunaga 17-aad wuxuu dhaley 23 caruur ah isagoo guursadey shan xaas oo kala duwan.
Osama wuxuu ku koray waxbarashada qur’aanka iyo tan maadiga isagoo yar waxaana uu dhigan jirey iskool ay maamulayeen macalimiin iyo maamulk Ikhwaanu Muslimiinka ama waxaa la sheegay in aad loogu diyaariyey fikradaha Wahahabv.
Sanadihii 1968 ilaa 1976 wuxuu dhigan jirey iskool lagu magacaabi jirey Al-Thager oo ku yiil magaalada Jidah.
Osama wuxuu bartey cilmiga dhaqaalaha Businiess administration oo ku bartey jaamadacada King Abdulazia University, waxaa kale oo jira in uu bartey degree in civil engineering isagoo sidoo kale 1979-kii qaatey degree la xiriira puplic administartion. Horaantii sanadkii 1980-kii ayuu wiilkan yar ee hantiilaha wuxuu soo jiitay indhaha bulshada caalamka ka dib markii hantidii uu lahaa ee balaayiinka doolar gaaraysay uu ku bixiyey dagaalkii wadanka Afganistaan lagaga xoreynayey Midowgii Soofiyeeti, wixii xiligaasi ka dambeeyey wuxuu bartilmaameed u ahaa laamaha sirdoonka Mareykanka iyo warbaahinta.
Xiriirka Mareykanka & Bin Ladin
Xulafadii Mareykanku helay waxaa ka mid ahaa Sacuudiga, waxaana ay taasi keentey in ciidamada Mareykanka ay saldhigyo ciidan ka helaan dalka Sacuudiga, taasi ayaa keentey in Osaama Bin Ladin uu si aad ah arintaasi uga horyimaado talaabada boqortooyada Sacuudiga. Bin Ladin wuxuu si weyn u dhaliiyey siyaasada Boqortooyada Sacuudiga, isagoo ku eedeeyey inay Mareykanka dajisey dhulkii Barakaysnaa, waxaana Mareykanka uu ku tilmaamey cadowga Islaamka, taasi waxay keentey in Bin Ladin laga saaro wadanka Sacuudiga oo uu tago wadanka Suudaan halkaasi oo uu ku noolaa mudo sanooyin ah.
Weeraro ka dhacay wadanka Sacuudiga oo lagu qaadey danaha Mareykanka ee wadankaasi iyo waliba saldhigyada ciidamada Mareykanka ee wadanka Sacuudiga ayaa waxaa lagu eedeeyey Bin Ladin uu ka dambeeyey, taasi oo sii xoojisey nacaybkii ay isku qabeen Mareykanka iyo Bin Ladin. Sanadkii 1993-dii ayuu ku dhawaaqey Ururka Al-Qaacida oo uu sheegay in looga gol leeyahay inay la dagaalamaan Mareykanka iyo wadamada reer Galbeedka oo uu ku sheegay inay Islaamka ka dhigeen wax ay duleystaan.
Bin Ladin wuxuu sii noqdey nin soo jiita indhaha sirdoonka Mareykanka, waxaana dadka Mareykanka lagu shubay in Bin Ladin uu ku yahay Qatar ayna ka digtoonaadaan.
Weerarkii Aden, Yemen, USS Cole, 2000 Sanadkii 2000 dalka Yemen gaar ahaan magaalada Cadan waxaa ka dhacay weerar si caaqibo leh loo soo agaasimay waxaana doon ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa lala beegsadey markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacabu jirey USS Cole waxaana weerarkaasi ku dhintey 17 ciidamada Mirenes-ka Mareykanka ee markabkasi saarnaa.
Weerarkii Kenya & Tanzania
Sanadkii 1998-kii ayaa waxaa wadamada Kenya iyo Tansaniya ka dhacay laba weerar oo isku xili dhacay oo lagu qaadey safaaradaha Mareykanka ee dalalkaasi waxaa halkaasi ka dhacay khasaare naf iyo maal leh dadka le’day waxaa ka mid ahaa Mareykan, waxaana masuuliyada weerarkaasi gorada loo surey Osama Bin Ladin. Madaxweynihii Mareykanka ee xiligaasi Bil Clinton oo ay haysatey fadeexadii caanka ah ee Monica Lewinsky oo aheyd gabar aqalka cad ka shaqeyn jirtey oo lagu eedeeyey in Madaxweyne Clinton in uu gacmagacmeeyey ayaa wuxuu qaadey weerar uu ku ekeeyey wadamada Afgaanistaan iyo Suudaan, iyadoo weerarkaasi lagu macneeyey in lala maaganaa in lagu burburiyo wax Mareykanku ugu yeeray goobo Bin Ladin ku tababaro xoogag argagixiso ah.
Nacaybkii ayaa sii kordhay waxaana Bin Ladin iyo tiro saxaabadiis ah lagu darey dadka loogu doondoonista badan wadanka Mareykanka.
Weerarkii September 11
Sanadkii 2001-dii September 11-keedii ayaa waxaa dhacay wax lama filaan diyaarado Mareykanku leeyahay ayaa inta la soo afduubey waxaa lagu weeraray dhismayaal kala duwan oo ku yiil wadanka Mareykanka oo ay ka mid yihiin daarihii Ganacsiga iyo xaruntii wasaarada gaashandiga Mareykanka. Weerarkasi waxaa lagu eedeeyey Bin Ladin mudo ka yar dib ayaa Madaxweyne Bush wuxuu sheegay in Bin Ladin nolal ama geeri la hor keeno doono shacabka Mareykanka laakin 10 sano ka dib markii weerarkaasi dhacay hada ayaa la Obama uu sheegay in la dilay Bin Ladin.
Si kastaba ha ahaatee geerida Osama Bin Ladin waxay noqon doonto mid saameyn weyn ku yeelata dagaalka Mareykanka uu ugu yeero la dagaalanka argagixisada, iyadoo laga cabsi in dagaalkaasi uu sii xoogaysyto oo uu waliba sii socdo.
c.qadir adan xisbi says:
تمكنت قوات الحكومة الانتقالية الصومالية وأخرى متعاونة معها من تنظيم أهل السنة يوم الأربعاء من السيطرة على مدينة غارباهاري حاضرة إقليم جيدو الواقع جنوب غرب الصومال دون قتال، بعد انسحاب مقاتلي حركة الشباب المجاهدين منها.ca_q_iil@hotmail.com
masha allah great perfomances